Mayelana NATHI - I-Baron (China) Co., Ltd.
IBaron (China) Co, Ltd. yasungulwa ngotshalomali lweBaron Group International Holding Co., Ltd. Isekelwa yimikhiqizo emibili emikhulu yamazwe omhlaba, iBesuper neBaron, ucwaningo nentuthuko, ukuklama, ukukhiqiza, ukuthengisa, insizakalo njengenye yamabhizinisi amakhulu wokuhlinzeka ngezinsana.
Ngaphandle kwebhizinisi le-OEM, kulo nyaka inkampani yethu, ngokususelwa eminyakeni yokuhlangenwe nakho kweQembu kanye nokuqwashisa ngemakethe okunamandla, yethule ngenkuthalo inani lemikhiqizo ezimele yokuhlinzeka abathengi ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi engabizi kakhulu, kufaka phakathi iBesuper Fantastic T Diapers, iPandas Eco elahlwayo Amanabukeni, amanabukeni asanda kuzalwa, njll., Athandwa kakhulu ngabathengi.
Thuthukisa futhi unikeze Imikhiqizo ye-ODM
Sakha imikhiqizo ye-ODM yezitolo ezinkulu, izitolo zokunakekelwa komuntu siqu namanye amabhizinisi ngokulalela, ngokubheka nokucabanga ngezidingo zamakhasimende. Imikhiqizo enhlobonhlobo, efana namanabukeni ezingane, izesuli ezimanzi, amanabukeni abantu abadala, izikhwama zemfucumfucu e-eco-friendly, napkins yabesifazane yenhlanzeko neminye imikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu ukuhlangabezana nezidingo zabathengi.
Ummeli Wemikhiqizo Ekhishwe Nge-Premium
Sekuyiminyaka, inkampani yethu isebenze kanzima ukusungula ubudlelwano besikhathi eside bokusebenzisana nezinkampani zemikhiqizo yenhlanzeko emhlabeni wonke.Inkampani yethu imele izinhlobo eziningi zemikhiqizo esezingeni eliphakeme, kufaka phakathi iCuddles, Morgan House, Ukukhetha Komama, Amandla Amandla, njll. Sinikezela ngemikhiqizo yokunakekela izingane, imikhiqizo yokunakekela abantu abadala, imikhiqizo yokunakekela abesifazane, njll, futhi sihlangabezana nezidingo zezinhlobo ezahlukene zamakhasimende.
Ithimba Lobuholi Elisebenza Kahle
Ithimba labaholi abangochwepheshe lihola inkampani kumodeli yesimanje yebhizinisi. Ukucabanga okusha kuholele ekutheni siphushe imikhiqizo yethu e-Southeast Asia, Africa, Australia, United States nasemhlabeni jikelele.
Ngeminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho kokumaketha, ulwazi lomkhiqizo ocebile, ukucabanga okunesibindi nokusha, ithimba lethu lokuthengisa elinamakhasimende ahlukile ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo esondelene kakhulu.
Ngenxa yokumiswa kochungechunge lokuthengwa kwezinto, ukuthenga okuphakathi nendawo kusilethele inzuzo yezindleko zempahla eluhlaza; ukulawulwa okuqinile kohlelo lokukhiqiza kukhuphule izinga lemikhiqizo eqediwe futhi kwehlise nezindleko, ngakho-ke singanikeza amakhasimende imikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi engabizi kakhulu.
Singumhlinzeki wokuqondiswa okugunyaziwe okugunyaziwe kwamabhizinisi enabukeni, ukushintshana njalo ngenyanga ngezinto ezisetshenziswayo nobuchwepheshe, siqinisekisa ukuvuselelwa komkhiqizo ngendlela efika ngesikhathi nokulawulwa kwekhwalithi yomkhiqizo.
Inabukeni Elisanda Kuzalwa, Izingane Zisula Isikhumba Esibucayi, I-Super Absorbency Adult Inabukeni, Ikhwalithi ephezulu ye-Eco, Inabukeni alahlwayo, Inabukeni Baby,
Inabukeni Baby, Inabukeni Elisanda Kuzalwa, Izingane Zisula Isikhumba Esibucayi, Ikhwalithi ephezulu ye-Eco, Inabukeni alahlwayo, I-Super Absorbency Adult Inabukeni,